Bluetooth FM Modulator၊ ဖုန်းအားသွင်း၊ ဖုန်းနားကြပ်စျေးနှုန်း ...
အစကားတစ်စီးကုန်ပစ္စည်းများကားတစ်စီးဆက်စပ်ပစ္စည်း, GPS, မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များဘလူးတုသ် FM ရေ Module, ဖုန်းအားသွင်း, နားကြပ်
ဘလူးတုသ် FM ရေ Module, ဖုန်းအားသွင်း, နားကြပ်
V2.0 ဘလူးတုသ်မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာကြိုးမဲ့စတီရီယို Handsfree MP3 Player ကို
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ဘလူးတုသ် FM ရေ Module, ဖုန်းအားသွင်း, နားကြပ်
Control ပါဝါခလုတ်, breakpoints အားမှတ်ဉာဏ်ကစား
flash drive, ဆဲလ်ဖုန်း
X ကိုက x 11.50 2.50 2.00 စင်တီမီတာ x ကို 4.53 0.98 0.79 လက်မ x ကို
X ကိုက x 12.00 5.00 2.50 စင်တီမီတာ x ကို 4.72 1.97 0.98 လက်မ x ကို
1 ဘလူးတုသ် FM ရေ transmitter မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ x, အသံ Cable ကို 1, 1 အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x x
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ဘလူးတုသ် FM ရေ Module, ဖုန်းအားသွင်း, နားကြပ်
Liam - 2019 10 ဇွန်
ကို set up နှင့်ဖုန်းချိတ်ဆက်ရန်တကယ်ပဲလွယ်ကူပါတယ်။ မီဒီယာအသံအရည်အသွေးနဲ့ volume level ကိုနှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ နှင့်အခြားအလားတူထုတ်ကုန်တွေအများကြီးနဲ့မတူပဲ, အဘေ့အဆင့်ကိုလည်းအလွန်ကောင်းပါ! ငါကဘလူးတုသ်၌ငါ့ကားကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသံအဘို့ကိုသာဆက်သွယ်အဖြစ်ကားထဲတွင်အသံကစားရန်မီဒီယာဝယ်ယူခဲ့သည်။ Tačiau, ငါကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဤအတူဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေ, ငါ့က Galaxy S6 အတူငါမီဒီယာအသံအဘို့ဤထုတ်ကုန်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာဘလူးတုသ်အသံများအတွက်ခေါ်ရန်၌ငါ့ကားကိုချိတ်ဆက်ပါ! ဒါကြောင့်သင်ကဂီတကိုနားထောင်နှင့်စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုစသည်တို့ကိုဖြေကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စုံလင်သည်။ ဖြန့်ဝေ - ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေမိန့်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထက်နည်း5ကျထကျ၌အပျတျောမူခဲ့သညျ။ တစ်ဦးတနင်္ဂနွေကျော်အဖြစ်ကောင်းစွာ, ဒါကြောင့်အလွန်လျင်မြန်။ အားလုံးပတ်ပတ်လည် bargain! မဆိုမတှေ့နိုငျ
Caraivan Costel - 2019 10 ဇွန်
တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်။ ဒါဟာအလွယ်တကူသင်၏ဖုန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်, ကောင်းသောအသံ။ Stik နှင့် phone.In အလွန်ကောင်းစွာ .Eftin ကွားနိုငျနှင့်ကောင်းတစ်ထုတ်ကုန်ဖြင့်အလွန် quickly.Un PRODUS foarte Bun ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သင့်စကားဝိုင်းများကနေသီချင်းဖွင့် se bine se conecteaza ကုဗ foarte Brzana telefonul aude ။ Aude foarte bine.Un PRODUS eftin si Bun အတွက် Reda muzica က de pe Stik si က de pe telefon.In convorbiri ။ တစ်ဦးက sosit foarte repede တိုက်ရိုက် la usa ။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်ဖျားမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကကြီးမားသောအနုတ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ။ ယေဘုယျအားကောင်းတစ်ဦး product.Acest nu Telecomanda ဖြစ်ကြသည်။ un မြင်းအနုတ်။ pacate.Per စုစုပေါင်း PRODUS un Bun din ။
Zeljko Lipniku - 2019 10 ဇွန်
သငျသညျပိုမိုပေါ့ပါးစီးကရက်သို့ဤ plug ကိုနှင့်တကွ, ကားထဲတွင်နားထောင်ရန်လွယ်ကူသောဤစက်ကိရိယာနှင့်အတူက USB key ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ download လုပ်ပါနှင့်သင့်နားအပါး၌ဂီတရှိတယ်ဘယ်ဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု high-quality music player ။ ရိုးရှင်းစွာဂျီအက်စ်အမ်ချိတ်ဆက်နှင့်လက်တို့ကို-အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုလုပ်, ဒါကြောင့်မိမိလက်တစ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ပြီးအားဖြင့်ရဲရန်မပင်နယ်တီလည်းမရှိ။ သင့်ရဲ့ကားထဲတွင်ဒါကြောင့်အရည်အသွေးနှင့်တကယ်အကောင်းနှင့် favorabl device ကို။ သငျသညျပိုမိုပေါ့ပါးစီးကရက်သို့ဤ plug ကိုနှင့်တကွ, ကားထဲတွင်နားထောင်ရန်လွယ်ကူသောဤစက်ကိရိယာနှင့်အတူက USB key ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ download လုပ်ပါနှင့်သင့်နားအပါး၌ဂီတရှိတယ်ဘယ်ဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု high-quality music player ။ ရိုးရှင်းစွာဂျီအက်စ်အမ်ချိတ်ဆက်နှင့်လက်တို့ကို-အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုလုပ်, ဒါကြောင့်မိမိလက်တစ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ပြီးအားဖြင့်ရဲရန်မပင်နယ်တီလည်းမရှိ။ သင့်ရဲ့ကားထဲတွင်ဒါကြောင့်အရည်အသွေးနှင့်တကယ်အကောင်းနှင့် favorabl device ကို။
ယာဉ်ဆေးသုတ်ရုပ်ရှင်အထူ gauge GY910
BT - 36 ဘလူးတုသ် FM ရေ modulator တွေကို, handsfree
built-in ကားကိုဖျော်ဖြေရေးစနစ် Ezonetronics RM - CT0008 (GPS စနစ်, ရေဒီယို, DVD, Wi-Fi, Bluetooth ကို)
ယာဉ်အဖြေရှာတဲ့ device ကို ELM327 Wi-Fi OBD2
Xiaomi က ROIDMI3ဘလူးတုသ်ကို USB အလိုအလျောက်အားသွင်း, FM ရေ modulator တွေကို